I-7feathers Suite -Unique, Hlanza Umbhede ongu-1 - I-Airbnb
I-7feathers Suite -Unique, Hlanza Umbhede ongu-1
Pincher Creek, Alberta, i-Canada
Phumula futhi ujabulele i-Pincher Creek enhle, i-Waterton ne-Castle Mountain, izindawo eziningi zokuqwala izintaba eziseduzane, bese ufika ekhaya kuleli kamelo eliyingqayizivele nelivulekile, elizimele eduze nedolobha lase-Pincher Creek. Eduze komzila wokuhamba, izindawo zokudlela nasendaweni enokuthula. Indlwana iyingxenye ehlukile yekhaya lamagugu elinezici eziningi eziyingqayizivele. Ikhishi eligcwele, ilondolo, i-Netflix esikrinini esikhulu, i-wifi, indawo yomlilo kagesi ethokomele, i-shower, i-quaint front porch kanye namathani ezinhlamvu. Konke okudingayo kukhona lapha. Ukuthula kuthenjisiwe.
Indawo yangasese neyingqayizivele konke okungokwakho. Ikamelo lokulala elihlukile, ikhishi elikhulu negumbi elikhulu lokuphumula. I-shower ongena kuyo kanye nomshini wokuwasha kuyatholakala futhi kusha sha. Vele upake emnyango wangaphambili bese uya ezitebhisini ezimbili phezulu futhi ungene. Eduze kwedolobha lase-Pincher Creek, indlela yokuhamba, izindawo zokudlela, ukuthenga, i-Waterton National Park nendawo yokushushuluza eqhweni yase-Castle Mountain.
Ihlelwe endaweni yokuhlala enokuthula nenokuthula, leli kamelo liseduze nomzila wokuhamba ogudla umfula ozokuyisa edolobheni lase-Pincher Creek amabhuloho amabili kude. Lindela izihlahla, izinyoni nokulala kahle ebusuku.
Ngizotholakala esimweni esiphuthumayo kuphela.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pincher Creek namaphethelo